यस्ता छन् राति नाङ्गै भएर सुत्नुका फाइदाहरु – Deshko News
Home » मनोरन्जन » यस्ता छन् राति नाङ्गै भएर सुत्नुका फाइदाहरु
तपाई हामीमध्ये धेरैजसो चिसो याममा हल्का कपडा र गर्मी याममा अन्डरवेयर लगाएर सुत्ने गर्दछौ । तर, विशेषज्ञहरुका अनुसार यसो गर्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार सबैभन्दा उत्तम सबै कपडा खोलेर सुत्नु हुने गर्दछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार गुप्तअंगहरुलाई पनि राति कपडाबाट राहत दिनुपर्दछ । यसो गर्दा विभिन्न इन्फेक्सनबाट बच्न सकिन्छ ।
पसिना आउने शरीरका अंगहरुमा ब्याक्टेरियालाई फैलने अवसर प्राप्त हुन्छ । विशेषगरी त्यस्ता अंगमा जुन सबै कपडाले ढाकिएको हुन्छ ।
यसबाट महिलाको तुलनामा पुरुषहरुमा बढी समस्या देखिने गर्दछ । यसबाट पुरुषको प्रजनन क्षमतासमेत प्रभावित हुन्छ । न्युयोर्कमा गाइनोकालजिस्टको क्षेत्रमा काम गर्ने डा. अलिसाले हालै यस विषयमा लेखेकी छन्–म सधैं आफ्ना विरामीहरुलाई भन्ने गर्दछु कि बिना अन्डरवेयर सुत्ने गर्नुस् ।
उनले भनिन्–यदि तपाई सधैं कभर गरिरहनु हुन्छ भने पसिना सुक्न पाउँदैन । सधैं गिलो बनिरहन्छ । र, त्यसबाट ब्याक्टेरिया फैलने सम्भावना रहन्छ । गिलोपनका कारण रोगहरु फैलने सम्भावना बढ्छ ।
यसबाट खटिरा र छालामा इन्फेक्सन हुने आशंका बढ्छ । महिलामा यसको असर झनै बढी हुन्छ । यसको स्पष्ट असर उनीहरुको पिरियडमा पर्दछ।
डा. अलिसाले भनिन्–जो राति नाङ्गै सुत्न सक्दैनन्, उनीहरुले खुकुलो कपडा लगाउनु राम्रो हुनेछ । राति तपाईले पनि बिना कपडा सुत्ने बाँनी भने बसाल्नु राम्रो हुनेछ ।
एक सर्भेका अनुसार ब्राजिलमा खुला समाज छ, तैपनि त्यहाँ १८ प्रतिशत महिला मात्र बिना अन्डरवेयर ओछ्यानमा जाने गर्दछन् । यो आँकडा बेलायतको तुलनामा कम हो । महिला र पुरुषमा यसको अलग अलग औचित्य छ । तर, गर्भधारणमा यसको असर पर्दछ । एजेन्सी
हेमन्ताले नचाइन् छमछमी (भिडियोसहित)
सनी लियोनीको बायोपिक फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
बाढी आएपछि अशोक दर्जीका परिवार आफन्तको शरणमा (भिडियो सहित)